I-BLUE GENE TYRANNY: AMANQANABA ENKULULEKO AFUMENE UPHONONONGO LWEALBHAMU - IINDABA
Imigangatho yenkululeko ifunyenwe
Umsebenzi ongoyikiyo womdlali wepiyano we-avant-garde ongasekhoyo ubhiyozelwa nge-anthology entsha, ebonisa italente yakhe enkulu kunye nothando.
Xa wayesesikolweni sabantwana abancinane, umdlali wepiyano ongasekhoyo we-avant-garde uBlue Gene Tyranny wazisa iirekhodi zakhe azithandayo ukubonisa-kwaye uxelele. Wenza amakhasethi erekhodi yezandi emva kweyadi yakhe, wacula kwikwayala yecawa yakhe yamaLuthere, wade waya nakwiinkonzo ezongezelelekileyo zamaBhaptizi ukubakhapha kwipiyano. Nge-11, wathabatha iiklasi zokubumba kwiYunivesithi yaseTrinity, apho utitshala wakhe wamthumela noCharles Ives noHarry Partch LPs emva kwesifundo sabo sokuqala. Kwesinye sezabelo zakhe zakuqala, ngabom waqamba isiqwenga seethoni ezili-12. Kungekudala waba ngumhlobo womqambi uPhilip Krumm, kwaye bobabini bafaka iminyhadala apho iTyranny yenza umculo nguJohn Cage, Morton Feldman, kunye no-Anton Webern, kunye neziqwenga zemidlalo yeqonga ezivela kuDick Higgins, uGeorge Brecht, uYoko Ono, kunye noLa Monte Young. Wayeneminyaka eyi-14 ngelo xesha.
Ngaphandle kwegama lakhe leqonga, u-Tyranny wayengumntu onobubele, ohlekisayo, kunye nokuzilolonga ophakamisa abanye nanini na kunokwenzeka. Kuxwebhu lukaDavid Bernabo luka-2020, OkweRekhodi kuphela: Incoko kunye kunye noGuqulelo oluBomvu 'lweGene , injineli yesandi uPhilip Perkins uphawula ukuba, xa edlala kumculo odlalwayo, yonke imvumi ngaphandle kweTyranny yayinikwa isolo iyodwa: Ixhasa wonke umntu… yile nto ayiyo. Abo babesazi ubuzwilakhe babemthatha njengomnye wabadlali bepiyano abakhulu abasaphilayo. Kwaye nangona indumiso enjalo ingakhokelelanga kudumo olukhulu, ukukhutshwa koovimba belebheli engabonakaliyo yeHlabathi-ngokukodwa ukuphinda kukhutshwe kwakhona ngobugcisa be-avant-pop Nje esithubeni kunye nealbhamu ephilayo Thembela eLiwa -Uncede ukuzisa umculo wakhe kubaphulaphuli abaninzi. Imigangatho yenkululeko ifunyenwe , ukukhululwa kwakhe okokuqala emva kweleyibhile, kubaluleke nangakumbi: i-anthology eneediski ezintandathu ezinemizuzu engama-380 yomculo erekhodwe phakathi kuka-1963 no-2019, egcwaliswe ngamanqaku amakhulu ebhulorho evela kuTyranny ngokwakhe.
Ibhulashi elisondeleyo likaTyranny nodumo lwafika kwii-70s zokuqala xa wayesiya kukhenketho neeStooges njengomdlali wepiyano (yena no-Iggy Pop baqala ukudlala kunye kwi-60s blues-rock band Inkulumbuso ). Eqongeni, ubuzwilakhe buya kuvela kwimpahla edlakadlaka, enee-diode ezikhanyayo ezinweleni zakhe, ukubila kwakhe ngamanye amaxesha kukhokelela kumothuko wombane. Ngelixa wayengenakuqhubeka nokuhla kule ndlela ye-punk, umoya wakhe wokuzimisela wahlala. Ngethuba lokuqala kuka-1980 ukusebenza ngokuqhubekayo kukaRobert Ashley Ubomi obugqibeleleyo , i-opera apho iTyranny idlala indawo kaBuddy, uMdlali wePiano oMkhulu weHlabathi, iziqwenga zesipili esaphukileyo zanqumla izandla zakhe zaza zashiya ipiyano yakhe ithe saa ligazi.
Ukuzinikezela okunjalo kubugcisa kuyaqhubeka Imigangatho yenkululeko ifunyenwe . Imfihlo yobuzwilakhe yokuxubusha iimvakalelo ezinzulu ilele kuxinzelelo phakathi kolwakhiwo kunye nokuzenzekela. Ngelixa isenzo sokulinganisela singacacanga kwimisebenzi yakhe yepop, ipiyano yodwa kunye neziqwengana zepiyano kule centi zenza indlela yakhe icace. Njengoko ehamba kwisiqwenga sokuvula ileta esuka ekhaya, ethatha iindlela ezigwenxa kunye neendlela ezihamba ngendlela, iTyranny igcina isimo esihle, esithandekayo: isibonakaliso sokukhumbula ukukhumbula okubonakalayo Nje esithubeni ’S Yandisiwe ithathe umkhondo . Nokuba kukwinqanaba elincinci okanye elikhulu, ukuqamba kwakhe kwafezekiswa ngokupheleleyo.
Ukuphinda uqhelane kunye nokwenziwa ngokutsha kweengoma kwakuyinto eqhelekileyo eTyranny kuwo wonke umsebenzi wakhe. I-Tango yesiBini, umzekelo, yayiqale yaqanjwa ngo-1984 njengesiqwengana sepiyano solo kwiNgqokelela yeHlabathi yeTango. Kwinguqulelo apha, iTyranny idume ngepiyano kunye neokhestra ye-elektroniki, ekhokelela kuthotho lwezixhobo ezihlanganisiweyo kunye nokukhanya kwe-technicolor kunye nokuziphendukela kwemvelo okungalindelekanga. IiChords ezingama-36 ezivela kuNyana woMqhubi, enye into ebalaselisayo, ineemodyuli ezingenamthungo kunye nolwakhiwo lwe-quizzical-kukho amandla kwiziphatho ezinobulali kunye nobabalo kwezona zinto zixabisekileyo. Umculo ovela kwiChords ezingama-36 utsalela uNyana woMqhubi, uhambo olujikelezayo olunemizuzu engama-80 yokusebenza kuka-1999 esebenza njengebhokisi ebekwe embindini webhokisi. Nabanye abadlali beqonga abane ababonelela ngezwi, i-synthesizer, kunye ne-percussion, yinto epheleleyo, efanele inkcazo yeTyranny njengebhodi yamabali evakalayo.
jonga ngaphaya kokuqaqamba kwakho
U-Tyranny wayewuthanda umculo we-avant-garde ngenxa yokuba unokuthi wandise ngaphaya kweemeko ezithile zobomi bakho kunye nembali yonke yomculo. Njengoko wayechaza ngaphakathi Ukuhanjiswa kweSonic: Imida emitsha kuMculo wethu , Ukuzama kangangoko kunokwenzeka ukunqanda iiPuritanism eMelika nakwezinye iindawo ngumsebenzi. Injongo yakhe yezopolitiko ibonakaliswe kakhulu kwiHarvey Milk (Portrait), umkhondo osuka ku1979 obonisa intetho evela kwezopolitiko zaseSan Francisco evulekileyo, evakala sisandi seTyranny's sparse blips. Isiqingatha sesibini asithethi-sibonisa ngokucacileyo ukubulawa kobisi kunyaka ophelileyo. Olu tshintsho lulula ludala imeko-bume engathandekiyo: ukucamngca kwithemba elilahlekileyo.
Umculo ubonelele ngamathuba oBuzwilakhe ukuba azivulele indawo angaqhelekanga, eyayiyinjongo ephambili yomsebenzi wakhe wokusebenzisana. Omnye wemizekelo ebalaseleyo uvela kwiNdlela eya eBlountstown (Ibali eliyinyani), ingoma eyayiphuculwa kakhulu xa u-Tyranny kunye nemvumi uLoyoy Jenkins babenemizuzu eli-10 eshiyekileyo ngo-2001 kwaye kungekho zixhobo ziseleyo zokudlala. Kwintshayelelo, uJenkins wabelana ngebali malunga nokumiswa ngunothimba wasiwa ejele. Emva koko, uJenkins uvakalisa phezulu kwi-piola yakhe kunye nepiyano yeTyranny, zombini iimvumi kwingxoxo efanelekileyo. Njengoko ipiyano kaTyranny idanisa ecaleni kwentambo ekhalayo, ubaleka kwiimvakalelo ezininzi ukuya kwinyama kwidrama yebali.
Wayenokufumana inkuthazo kwinto elula ngakumbi. Ungayijikisa njani inja, ukusukela ngo-1984, yinto edangazayo ebonisa ukuba umbhali wemidlalo edlalwayo uRoger Babb uthetha ngesantya sombane ngokwembono yenja; yenye yeendlela ezihamba phambili Imigangatho yenkululeko ifunyenwe , kwaye kuvela iklasikhi yakudala-’80 yobugcisa besikolo. Kwi-2019 yeThe Forecaster Hopes, eyona nto intsha, uhlalutyo lwe-elektroniki lwe-1960 yendalo, izandi ze-quotidian iba ngumthombo wemithombo yokuvelisa isingqisho esingaqhelekanga solungelelwaniso lomtya wakhe. Ingoma ikhawuleza kwaye iguqukile, ichazwa yi-aura ethembisayo: isimilo somculo somntu ohamba ebomini uqobo. Njengengoma yokugqibela Imigangatho yenkululeko ifunyenwe Isebenza njengelitye lembombo kolu luvo lupheleleyo lomsebenzi wobuzwilakhe. Luhlobo lomculo olushiya woyike: isikhumbuzo sokuba umculo uhlala usenza okufanayo kuye.
j tillman woyika ukonwaba
ixesha lokufa iwizard yombane
flo morrissey matthew e mhlophe
isandi somsindo kunye nokuvutha komsindo
UDavid Bowie uyamthanda umfokazi
jay z rock fella
amalulwane ngemivumbo yelanga ezimbini